सुपर न्यादीमा लगानी जुट्यो - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
सुपर न्यादीमा लगानी जुट्यो
फागुन ३०, २०७४ 2976 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
लमजुङमा निर्माण हुने ४०.२७ मेगावाटको सुपर न्यादी जलविद्युत आयोजनामा ६ बैंकले लगानी गर्ने भएका छन् । एनएमबी बैंकको अगुवाईमा प्रभु, मेगा, सेन्चुरी, एनसिसी र कुमारी बैंक लिमिटेडले ऋण लगानी गर्न लागेका हुन् ।
आयोजनाको प्रवर्द्धक सिउरी न्यादी पावर कम्पनी र बैंकबीच बुधबार लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा कम्पनीका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं र बैंकका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
७ अर्ब लगानीमा निर्माण हुने आयोजनामा ६ बैंकले ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने छन् । यो कुल लगानीको ७५ प्रतिशत हो । १ अर्ब ७५ करोड स्वपुँजी लगानी हो । ङाडी ग्रुप पावर कम्पनी मुख्य संस्थापक प्रवर्द्धक रहनेछ ।
आयोजनाको गत जेठ १९ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) भइसकेको छ । लगानीको जोहो भएपछि निर्माण सुरु गरिने कम्पनीका अध्यक्ष गुरागाईंले बताए । उनका अनुसार अहिले आयोजना स्थलमा आवश्यक पुर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ । यो आयोजना २०७७ सालभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
आयोजनाको बाँध तथा विद्युतगृह बाँहुनडाँडा गाविसमा निर्माण हुनेछ । विद्युतगृहमा २२ मेगावाटका २ टर्बाइन जडान हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक २३५.७६ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुनेछ ।
उत्पादित विद्युत आयोजनास्थल बाहुनडाँडादेखि ११ किलोमिटर दूरीको तारी खुना १३२ केभी सबस्टेसनमा जोडिनेछ । सबस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइन कम्पनीले आफैँले निर्माण गर्नेछ ।